ओलीको आक्रोश : यो छानविन समिति हो कि राजनीतिक ? « Janata Samachar
ओलीको आक्रोश : यो छानविन समिति हो कि राजनीतिक ?
प्रकाशित मिति : साउन ७, २०७६ मंगलबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कडा कार्बाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक खेल मैदान बनाउने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कडा कारवाही गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानको गैरजिम्मेवार कामको छानविन गर्न गठित समितिले आफूलाई नबुझाई प्रतिवेदन संचार माध्यामहरुमा सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
काठमाडौंमा आयोजित मंगलबार प्रतिष्ठानको तेस्रो सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुलपति समेत रहेको आफूलाई नबुझाई प्रतिवेदन बाहिर आउनुलाई राजनीतिकरणको संज्ञा दिँदै आफूलाई सैह्य नहुने स्पष्ट पार्नु भयो । ‘यो छानविन समिति हो कि राजनीतिक ?,’ छानविन समितिप्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोश सहितको प्रश्न छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानलाई तत्काल स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन केन्द्रित हुन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले सरकार कसैको दवाव र प्रभावमा नपर्ने भएकाले त्यहि अनुसार काम गर्न सबैलाई सचेत गराउनु भयो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानलाई प्रदेशकै स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न चाहेकाले सोही अनुसार काम गर्न सचेत गराउनु भयो ।